Annaga nagu saabsan - Shenzhen Roman Technology Co., Ltd.
dulmar guud ee shirkadda
Waxaa la aasaasay 2008, Shenzhen Roman Technology Co., Ltd. waa shirkad qaran oo heer caalami ah iyo mid ka mid ah 100ka shirkadood ee ugu halabuursan Shiinaha.In ka badan toban sano, iyada oo udub dhexaad u ah "naqshad cusub, R & D, iyo wax soo saarka saxda ah", Roman waxa uu si joogto ah u wanaajinayay silsiladda warshadaha ee shirkadda, kor u qaadida xooggeeda R&D, xoojinta awoodaha wax soo saarka, iyo koritaanka hoggaamiye ee Shiinaha ee warshadaha headset Bluetooth.
Warshada Casriga ah & Waxsoosaarka Wacan
Warshada smart ee Roman ee Shenzhen waxay leedahay awood wax soo saar bishii in ka badan hal milyan oo unug.Roman waxa ay dhistay shaybaadhka dhawaaqa sare oo madax banaan iyo machad R&D wax soo saarka si ay si joogto ah u wanaajiso una balaadhiso awooda wax soo saarka ee shirkada.Roman hadda waxa ay leedahay awood wax soo saar bishii in ka badan hal milyan oo unug.
Sahaminta Qoto-dheer ee Tignoolajiyada & R&D Joogta ah.
Roman waxa uu lahaa in ka badan 240 rukhsadaha asaasiga ah iyo shatiyada ikhtiraacida ee warshadaha, waxaana uu leeyahay koror sanadle ah oo ka badan 30 shatiyo.
Heerka-Kowaad & Tayada-Calaamka-Caansan
Roman waxa uu ka gudbay shahaadooyin caalami ah oo taxane ah, oo ay ku jiraan IS09001, CE, ROHS, iyo FCC.Roman wuxuu si madax banaan u sameeyay in ka badan 100 sameecadaha Bluetooth-ka ah, alaabteedana waxaa lagu iibiyaa in ka badan 50 waddan iyo gobollo ku yaal Yurub, Ameerika, Koonfurta Ameerika, iyo Koonfur-bari Aasiya.Waxaa intaa dheer, Roman waxa ay la shaqaynaysay shirkado badan oo caan ah oo Shiinaha ah sida OEM, ODM, ama wakaalad summeedka si loo gaadho natiijooyin guul-guulaysi ah.
Deji shirkadda oo go'aansatay in ay udub dhexaad u noqoto R&D iyo soo saarista alaabada madaxa dhegaha ee Bluetooth.
Waxa la gaadhay kobac sanadeed dhan 400%.
U samee waaxda ganacsiga dibadda si aad u horumariso ganacsiga OEM iyo ODM aduunka oo dhan.
Gudubtay shahaadada nidaamka hubinta tayada, oo ay ku jiraan ISO9001, CE, ROHS, iyo FCC.
Gudubtay hantidhawrka warshadda WalMart oo noqday lamaane muhiim ah WalMart ee Shiinaha.
Waxa la furay madax-madaxeedkii ugu horreeyay oo ku qalabaysan 4.0 chip-ka Bluetooth-ka, iyada oo iibka sannadlaha ahi uu ku dhacay tobanaan milyan oo adduunka oo dhan ah.
Waxa la aasaasay warshado maqal wireless ah oo xirfad leh silsilad deegaanka, waxaana la siiyay "Shirkadda Farsamada Sare ee Qaranka" iyo "Top 100 Innovative Small and Medium-Medium Enterprises".
Isbeddelka shirkadda ee la xaqiiqsaday, iyo tayada badeecada oo la hagaajiyay iyada oo la ballaarinayo awoodda lana horumarinayo wax-soo-saarka saxda ah.
Horumarinta kanaalada e-ganacsiga ee xudduudaha isaga gudba, oo laga gaaray koboc la taaban karo oo liddi ku ah fadhiidnimada wax soo saarka dhaqameed.
Waxa laga beddelay warshad shiinees ah oo saafi ah una beddeshay warshad shiinees ah oo caqli badan, oo la dhisay warshad caqli-gal ah oo otomaatig ah.
Waxay dejisay habka dhiirigelinta ee wax-qaybsiga ee dhammaan shaqaalaha shirkadu si ay u ururiyaan hibada hor-u-socodka ah ee warshadaha oo ay u ururiyaan tartanka asaasiga ah.
La wanaajiyey qaab dhismeedka shirkadda, iyo hagaajinta tayada alaabta iyo adeegyada si loo gaaro wada shaqayn qoto dheer oo macaamiisha la natiijada guul-guul.
Soo bandhigay suuqa iyo isticmaalayaasha falanqaynta xogta weyn si kor loogu qaado macluumaadka shirkadda iyo dhismaha otomaatiga ah.
Budhadhka dhegaha ee buuqa baabi'inaya, Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka ee bilaa-la'aanta ah, Bluetooth Mono Headset, Taleefannada Dhagaha ee Gudaha, Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0, Dheecaanka Bluetooth oo leh Mic,